आज, यो सबै डरलाग्दो लडाईंहरु को टाढा विगतमा थिए लाग्न सक्छ। तर यो त छ। सैन्य सञ्चालनका परिणाम रूपमा XXI सताब्दी मा अनुसन्धान अनुसार हाम्रो ग्रह विभिन्न क्षेत्रहरु मा हट स्पट बाहिर तोडने, पछिल्लो शताब्दीमा भन्दा टाढा कम मान्छे मारिए, भन्ने तथ्यलाई बावजुद। सशस्त्र संघर्ष, सैन्य संकटहरूको - सायद मानवता कहिल्यै तल आफ्नो हतियार राख्नु हुनेछ।
ग्रह मा गरम - यो कहिल्यै निको पार्न सबै जो पुरानो घाउ, जस्तै हो। एक समय को लागि संघर्ष ओइलाउन लागिसके, तर त्यसपछि फेरि, र फेरि बाहिर तोड, दुखाइ ल्याउन र मानिसजातिको लागि पीडित। अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूह अहिले विश्व खतरामा कि ग्रहमा हट स्पट को क्षेत्रहरु भनिन्छ।
त्यहाँ "इराक राज्य र Levant" (LIH) र सरकारी सेना बीच एक द्वन्द्व, साथै देश को अन्य धार्मिक र जातीय समूह थियो। को खलीफा - तसर्थ, आतंककारीहरूले सिरिया र इराक एक इस्लामी राज्य को क्षेत्रमा सिर्जना गर्न जाँदै छन् igil घोषणा गरेका छन्। निस्सन्देह, वर्तमान सरकार विरोध गरेको छ।
तर, आतंकवादियहरुको को सामना गर्नु गर्न क्षणमा सक्दैन। देश भर बाहिर तोडने को तातो सैन्य बिन्दु, र यसको सीमाना विस्तार गर्ने खलीफा LIH। आज यो हैलाब को सिरियाली शहर को सीमाना गर्न बग्दाद को एक विशाल क्षेत्र छ। Udzha र Tikrit - वर्तमान सरकारको सेना मात्र दुई प्रमुख शहर देखि आतंककारीहरूले जारी गर्न असफल भयो।
देश को जटिल अवस्था इराकी Kurdistan को स्वतन्त्रता प्रयोग। आपत्तिजनक सञ्चालन समयमा LIH कुर्द तेल उत्पादन धेरै प्रमुख क्षेत्रहरूमा शक्ति जफत। र आज इराक बाट referendum र secession पकड घोषणा गरेका छन्।
को गाजा पट्टी एक लामो समय को लागि हट स्पट सूची छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन समूह Hamas बीच द्वन्द्व दशकहरूमा लागि फेरि फेरि माथि flared। मुख्य कारण - दल को अनिच्छा प्रत्येक अन्य गरेको तर्क सुन्न।
त्यसैले, इजरायल Israeli क्षेत्रमा आक्रमण बाट आतंककारीहरूले रोक्न एक दृश्य संग प्यालेस्टाइन हतियार भंडार संग भूमिगत सुरुङ र गोदामों को पूर्वाधार नष्ट गर्न एक सैन्य सञ्चालन शुरू। Hamas पनि गाजा पट्टी को आर्थिक नाकाबन्दी हटाउन र कैदीहरूलाई जारी गर्न माग।
अब गाजा पट्टी मा तैनाथ गरिएको छ कि लड तत्काल कारण तीन Israeli किशोरीहरूको मृत्यु भएको थियो, र यो प्रतिक्रिया - इजरायल को हत्या। र जुलाई 17, 2014 नियमित सैन्य कार्य सुरु: ट्यांक चलाए, मिसाइलहरु उड्यो।
यो समयमा धेरै पटक पार्टी एक समझौता गर्न जा रहेको छ, तर सबै कुरा गर्नु न त कुनै लाभ गर्न प्रयासहरू। यो मान्छे को हत्या बम, विस्फोट जारी छ, र द्वन्द्व क्षेत्र मा पत्रकार डरलाग्दो हेर्न भनेर यस्तो तस्बिरहरू बनाउन ...
सिरिया मा द्वन्द्व कि को auspices अन्तर्गत बाहिर भङ्ग सरकार अचाक्ली दबेको विरोध प्रदर्शन पछि बाहिर भङ्ग "अरब वसन्त।" Assad को आदेश र एक गठबन्धनको अन्तर्गत संघर्ष सरकार सेना सिरियाली सशस्त्र साँचो युद्ध गर्न नेतृत्व गरेका छन्। यो लगभग सम्पूर्ण देश असर गरेको छ: बारेमा 1500 समूह ( "अल-Nusra फ्रंट", LIH, आदि) को सैन्य कार्य जोडिएको, 100 भन्दा बढी हजार नागरिकहरु हतियार उठाए। सबैभन्दा शक्तिशाली र खतरनाक कट्टरपंथी Islamists गर्न थाले।
हट स्पट आज देश भर छरिएका छन्। आखिर, सिरिया आतंकवादी गिरोह को एक विस्तृत विविधता को नियन्त्रणमा छ। मिति देश को सबै भन्दा, सरकार सेना नियन्त्रित। उत्तर राज्य पूर्ण कब्जा लडाकूको LIH। केही स्थानहरू मा कुर्द अझै पनि इलाका पुनः प्राप्त गर्न प्रयास भए तापनि। राजधानी बाट टाढा, विद्रोहीहरूले "इस्लामी फ्रंट" भनिन्छ एक संगठित समूह माथि कदम। र हैलाब शहर मा Assad को सैन्य सेना र मध्यम विरोध बीच skirmishes छन्।
देश दुई भागमा विभाजन गरिएको छ आदिवासी सम्बन्ध विरोध - Nuer र Dinka। तिनीहरूलाई पनि वर्तमान राष्ट्रपति लागू गर्न Nuer, राज्य को प्रधान जनसंख्या छन्। Dinky - दोस्रो दक्षिण सुडान को राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा ठूलो।
यो द्वन्द्व सुडानी राष्ट्रपति आफ्नो सहायक, उपाध्यक्ष, देशको तख्तापलट प्रकुपित गर्ने प्रयास भनेर सार्वजनिक गर्न घोषणा पछि बाहिर भङ्ग। तुरुन्तै पछि देशमा आफ्नो भाषण दंगे, विरोध र धेरै पक्राउ थाले। पूरा devastation र disorganization एक वास्तविक सैन्य संघर्ष मा विकास गरे।
आज, देश को तेल-उत्पादन क्षेत्रमा - यो हट स्पट। तिनीहरूले लज्जित उपाध्यक्ष नेतृत्व विद्रोहीहरूको अख्तियार अन्तर्गत छन्। यो सुडान को आर्थिक घटक मा नकारात्मक प्रभाव छ। नराम्ररी क्षतिग्रस्त र देश को शान्तिपूर्ण जनसंख्या: दस अधिक हजार सिकार बारेमा सात सय हजार शरणार्थी बन्न बाध्य भए। तरिका पनि द्वन्द्व समाधान गर्न, संयुक्त राष्ट्र नागरिक जनसंख्या लागि सुरक्षा रूपमा सेवा गर्न थियो जो आफ्नो peacekeeping आकस्मिक, दक्षिणी सुडान पठाइएको छ।
2014 को वसन्त मा, संग्रामशील यूनियन कुनै पनि सम्झौता गर्न आउन प्रयास गरेका थिए। तर, विद्रोही नेता खुल्लमखुल्ला उहाँले लामो विद्रोही नियन्त्रण गुमाएका थिए स्वीकारे छ। साथै, शान्ति वार्ता युगान्डन सेना सुडानी राष्ट्रपति छेउमा अभिनय रोकियो।
देश मा 2002 देखि "Boko Haram" भनिने आतंककारी इस्लामिक संगठन संचालित। तिनीहरूले पछि लाग्न मुख्य लक्ष्य - नाइजेरिया भर स्थापित गर्न छ Sharia व्यवस्था। तर, अधिकारीहरु र "प्रस्ताव" विरुद्ध नागरिक बहुमत, देश मा मुस्लिम दुवै बहुमत गठन छैन।
यसको संस्थापक समूह एक राम्रो संग सशस्त्र यसको प्रभाव, विस्तार र मसीहीहरू र मुस्लिम उहाँलाई सेट अप गर्न वफादार छन् मार्न खुल्लमखुल्ला थाले छ देखि। आतंककारीहरूले एक दैनिक आधार मा आतंकवादी कार्यहरू र सार्वजनिक रूपमा कार्यान्वयन मान्छे प्रतिबद्ध। यसबाहेक, तिनीहरूले समय समयमा hostages लिन। त्यसैले, अप्रिल 2014 मा कैद मा Islamists थप दुई भन्दा सय Schoolgirls थिए। तिनीहरूले दासत्वमा फिरौतीको, साथै वेश्यावृत्ति र बिक्रीको लागि तिनीहरूलाई राख्नुहोस्।
सरकार बारम्बार आतंककारीहरूले संग बातचीत गर्ने प्रयास भएको छ, तर कुनै वार्ता असफल भयो। आज, देश को सम्पूर्ण क्षेत्रहरु समूह शक्ति अन्तर्गत छन्। र अधिकारीहरु स्थिति सामना गर्न असमर्थ छौं। नाइजेरिया को राष्ट्रपति extremists गुमेको क्षणमा, देश सेना को लडाई क्षमता सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आर्थिक सहायता अनुरोध गरेको छ।
संकट कारण व्यापक भर माली Tuareg इलाका गर्न, लिबिया मा स्थान लिएर सैन्य सञ्चालन गर्न 2012, जब मा सुरु भयो। देश को उत्तरी भाग मा उनि Azawad भनिने राज्य गठन। तर, BREAKAWAY पावर मा वर्ष एक भन्दा कम एक सैन्य तख्तापलट मारे। क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने Tuaregs र कट्टरपंथी Islamists लड्न मद्दत गर्न - स्थिति फाइदा लिइरहेको, फ्रान्स सेना माली इलाका मा पठाए। सामान्य मा, आज Sahel दास व्यापार, लागूपदार्थ तस्करी, हतियार बिक्री र वेश्यावृत्ति एक किल्ला भएको छ।
सैन्य rivalries अन्ततः विशाल अनिकालबाट गर्न पुगे। संयुक्त राष्ट्र अनुसार, क्षेत्र एघार लाख भन्दा बढी मानिसहरू खाना बिना बसिरहेका छन्, र यदि स्थिति 2014 को अन्त द्वारा समाधान छैन यो आंकडा सात लाख गर्न वृद्धि हुनेछ। तर, राम्रो लागि कुनै परिवर्तन दृष्टि छ: सरकार बीच पूर्ण स्विंग शत्रुता, फ्रान्सेली, को Tuareg र आतंककारीहरूले मा माली को सम्पूर्ण क्षेत्र। र राज्य अब Azawad छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद यो।
मेक्सिकोमा, अधिक एक दर्जन वर्ष स्थानीय दबाइ cartels बीच निरन्तर टकराव बित्यो। तिनीहरूले पूर्ण भ्रष्ट थिए किनभने अधिकारी, कहिल्यै छोएको थियो। र यो जो कोहि को लागि एक गोप्य थियो। तर, 2006 मा, राष्ट्रपति Felipe Calderon रोजेको गर्दा, सबै कुरा परिवर्तन भयो। देश को नयाँ टाउको एक पटक निर्णय र सबै को लागि विद्यमान अवस्था परिवर्तन गर्न र अपराध सामना र कानून र व्यवस्था बहाल गर्न अमेरिका को एक एक सेना पठाएको छ। के राम्रो मा परिणाम होइन। अन्त मा सम्पूर्ण देश साबित जो युद्ध, अन्त टकराव सरकार सैनिक र डाकुओं गर्न।
को द्वन्द्व दबाइ cartels थाले पछि देखि आठ वर्ष मा बल, शक्ति प्राप्त छ र निकै यसको सीमाना विस्तार। तिनीहरूले मात्रा र narkoproduktsii को गुणवत्ता लागि आफूलाई बीचमा लडेको थियो भने, आज राजमार्गहरू, बंदरगाह र तटीय सहर लागि बहस गर्दै छन्। को माफिया को नियन्त्रणमा हतियार बजार, वेश्यावृत्ति, थिए जालसाजी उत्पादनहरु। सरकार सेना स्पष्ट यो लडाइँ गुमाउने। र कारण - भ्रष्टाचार। यो धेरै सैन्य बस दबाइ cartels छेउमा लिएर भन्ने तथ्यलाई गर्न आउँछ। केही क्षेत्रहरु मा, स्थानीय बासिन्दा पनि माफिया विरुद्ध protested: तिनीहरूले संगठित militias। यी मानिसहरू बिल्कुल को अधिकारीहरु न त स्थानीय प्रहरी न भरोसा छैन भनेर देखाउन चाहन्छु।
तातो केन्द्रीय एशियाली बिन्दु
क्षेत्र तनाव भएको अफगानिस्तान युद्ध, भयो दोश्रो प्रादेशिक विवाद संलग्न जो धेरै दशकहरु, साथै उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तान, को लागि कम गर्दैन सिर्जना गर्छ। क्षेत्र स्थिर संघर्ष अर्को कारण - पूर्वी गोलार्ध मा मुख्य दबाइ तस्करी। उहाँलाई किनभने निरन्तर स्थानीय आपराधिक गिरोह सामना गर्नुपरेको थियो।
यो आफ्नो Afghan युद्ध हटाइएको को अमेरिकी पछि, देश अन्तमा मन को आएको छ कि देखिन्थ्यो। तर यो लामो लामो थियो। राष्ट्रपति चुनाव पछि प्रशस्त थियो जो मिलता, वैध रूपमा मत पहिचान गर्न इन्कार गरे। देश मा अवस्थाको फाइदा लिएर एक आतंकवादी संगठन, "को Taliban" अफगानिस्तान को राजधानी कब्जा गर्न थाले।
जाडो 2014 ताजिकिस्तान र किर्गिस्तान सीमा क्षेत्रमा सैन्य कार्य सँगसँगै, प्रादेशिक विवाद संलग्न भए। ताजिकिस्तान किर्गिस्तान अवस्थित सीमाना उल्लङ्घन गरेको बताए। बारी मा किर्गिज सरकार नै उनलाई आरोप लगाए। समय दुई देशहरू समय बीच सोभियत संघ पतन भएकोले त्यहाँ सीमाहरु को वर्तमान पद बारेमा संघर्ष गर्दै छन्, र स्पष्ट विभाजित वा छैन। विवाद भङ्ग र उज्बेकिस्तान, पहिले नै आफ्नो दावी प्रस्तुत। प्रश्न एउटै छ: अधिकारीहरु को सोभियत संघ पतन पछि गठन थिए जो सीमाहरु, सहमत छैन। राज्य अक्सर तरिका स्थिति समाधान गर्न प्रयास गरेका छन्, तर एउटा सम्झौता र प्रश्न को विशिष्ट समाधान गर्न आयो। क्षणमा, क्षेत्र वातावरण अत्यन्तै काल छ, र कुनै पनि क्षण मा एक सैन्य कदम गर्न सक्नुहुन्छ।
चीन र क्षेत्र को देशहरूमा
आज, पार्सेल टापु - संसारको समस्या स्थलहरू छ। चिनियाँ को द्वीपसमूह नजिकै तेल वेल्स को विकास निलम्बित छन् भन्ने तथ्यलाई गर्न संघर्ष को शुरुवात। यो हनोई सेना पठाएको थियो जो भियतनाम र फिलिपिन्समा, जस्तै छैन। परिस्थितिको चिनियाँ मनोवृत्ति देखाउन, दुवै देशहरूको सैन्य को स्प्रैट्ली द्वीपसमूह मा एक महत्वपूर्ण फुटबल खेल खेलेका। यो तिनीहरूले विवादित द्वीप चिनियाँ युद्धपोत देखा नजिकै बेइजिङ क्रोध भनिन्छ। एकै समयमा कुनै लड यो बेइजिङ देखि थियो। तथापि, भियतनाम संग युद्धपोत कि तर्क छ चिनियाँ झण्डा एक भन्दा बढी माछा मार्ने पोत sunk छ। Recriminations र मई आरोप कुनै पनि समय कारण एक रकेट को उडान छ।
युक्रेनमा हट स्पट
युक्रेनमा संकट 2013 को नोभेम्बर मा सुरु भयो। मार्च मा Crimean प्रायद्वीप, रूसी संघ मा सारियो पछि, उहाँले बलियो थियो। देश मा स्थिति संग दुखी, समर्थक-रूसी कार्यकर्ता पूर्व युक्रेन गरेको डोनेट्स्क र Luhansk जनता गणतन्त्र गठन गरेको छ। नयाँ राष्ट्रपति Poroshenko नेतृत्व सरकार, को separatists विरुद्ध एक सेना पठाए। लड साइट Donbass (तल हटस्पट नक्शा) मा unfolded।
separatists नियन्त्रित Donbass इलाका भन्दा 2014 को गर्मी मा, मलेशिया देखि जहाज क्षति भएको थियो। 298 मान्छे मारिए। युक्रेनी सरकार यो दुःखद घटना आतंकवादियहरुको DNI र LC, साथै रूसी पक्ष कथित विद्रोहीहरूलाई हतियार आपूर्ति, र हावा-रक्षा प्रणाली, जो एक जहाज द्वारा मारा थियो मा दोषी घोषणा गरे। तथापि, DNR र LNR को दुर्घटनामा संलग्नता अस्वीकार गरे। रूस पनि युक्रेन मा द्वन्द्व र लाइनर को मृत्यु संग गर्न केही छ भने।
सेप्टेम्बर5मिन्स्क देश भएनन् मा तीव्र लड परिणाम जो एक ceasefire सम्झौता, हस्ताक्षर गरे। तर, केही क्षेत्रमा (जस्तै, डोनेट्स्क विमानस्थल) मा, shelling र विस्फोट अझै पनि जाँदै हुनुहुन्छ।
मिति, रूसी संघ सैन्य सञ्चालन सञ्चालन छैन, र कुनै हट स्पट। तर, हाम्रो देश को क्षेत्र मा सोभियत संघ पतन देखि बारम्बार संघर्ष flared छन्। त्यसैले, दशक रूस को उत्तेजक बिन्दु -, को पाठ्यक्रम Chechnya, उत्तर काकेशस र दक्षिण Ossetia छ।
पहिलो: 2009 सम्म, Chechnya सञ्चालनका एक स्थायी ठाउँ छ पहिलो चेचेन युद्ध (1994 1996 मा), त्यसपछि दोस्रो चेचेन युद्ध (1999 2009)। अगस्ट 2008 मा जोरजियन-ओसेसियन Name संघर्ष पनि रूसी सेना उपस्थित थियो जो थियो। को लड अगस्ट 8 मा थाले, पाँच दिन पछि शान्ति सन्धि को साइन परिणाम।
सेना र सेवा सम्झौता: आज रूसी सैनिकहरू त्यहाँ हट स्पट प्राप्त गर्न दुई तरिकाहरू छन्। सैन्य सेवा अभिशासित प्रावधान गरे परिमार्जन अनुसार, conscripts प्रशिक्षण चार महिना पछि समस्या स्थलहरू पठाए गर्न सक्नुहुन्छ (अवधि अघि छ महिना थियो)।
करार अन्तर्गत तातो स्थान देश समरूपी सम्झौता हस्ताक्षर गरेर पहुँच गर्न सकिन्छ। यो सम्झौता मात्र स्वैच्छिक आधारमा र एक निश्चित अवधि, को नागरिक सेवा गर्न बाध्य छ जसको लागि बनेको छ। किनभने यो पैसा धेरै गर्न सक्छन् सम्झौता सेवा धेरै आकर्षित गर्छ। रकम क्षेत्रहरु मा फरक। उदाहरणका लागि, कोसोभो सशुल्क 36 हजार प्रति महिना, र ताजिकिस्तान मा - धेरै कम। ठूलो पैसा Chechnya मा जोखिम लागि कमाएका हुन सकेन।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि, स्वयंसेवकहरु रक्षा मंत्रालय को साइट मा कम्प्युटर आधारित परीक्षण सुरु हुने र स्वास्थ्य, psyche, जाँच, कानून-पालन र लोयल्टी पूर्ण परीक्षा संग समाप्त, एक कठोर चयन undergo छ।
कूटनीतिज्ञ - देश को एउटा सरकारी प्रतिनिधि विदेश छ
Kraz-6322: समग्र उपकरण विनिर्देशों, परिमार्जनहरू
त्यहाँ एक एनालग GOPRO छ? थप बजेट कार्य-कोठामा हेर्दै
प्रेरित - यो हुनुहुन्छ? प्रेरित अर्थ
जनावर लागि "फ्रन्ट लाइन" दबाइ: समीक्षा, सङ्केत गर्छ, प्रयोगको लागि निर्देशन
स्मार्टफोन एलजी अप्टिमस L7 द्वितीय दोहोरो P715: सुविधा र समीक्षा
डीजल ईन्धनको लागि एंटीगेलका बारे सबै
ऐतिहासिक उपाख्यान गठन? के Pushkin गरेको उपाख्यान, राजनीतिक र "दाढी वाला" छ